ခရစ်တော်သဂြိုလ်ခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ထင်ယောင်ထင်မှားမှု | The Paradox of Christ’s Burial | Real Conversion
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၀ကြိမ်မြောက်ဒေသနာတော်)
၂၀၁၃၊ ဧပြီလ ၇ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ဘြွမ ။ဩွခင်ဘုရားနေ့၊ ည နေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာ၊
“ပြစ်မှားခြင်းကိုမပြု။ သူ၏နုတ်၌ မုသာစကားမရှိသော်လည်း၊ လူဆိုးနှင့်အတူမြေမြှပ် ခြင်းငှါ၊ စီရင်ကြ၏။ သို့ရာတွင်သေပြီးမှ သူဌေး၌ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၉)။
ခရစ်တော်ဘုရားသဂြိုလ်ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်သော တရားဒေသနာတော် ဘယ်နှစ်ပိုဒ်လောက် သင်နားထောင်ခဲ့ဖူးပါသလဲ? ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အသင်းတော်၌တရားဟောတာ နှစ်၅၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ အသင်းတော်၌ပါဝင်လာတာနှင့်ဆိုလျှင် ၅၉နှစ်ရှိပါပြီ၊ သို့သော် သဂြိုလ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဒေသနာ တော်တစ်ပိုဒ်မှ မကြားခဲ့သေးပါ! ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းဒေသနာတော်ကို ကြားဖို့မလိုပါဘူး၊ ၎င်းဒေသနာက အရေးမကြီးပါဘူးလို့ ဆိုကြပါလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ ၎င်းသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ အရေး ကြီးသောဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါသည်!
“ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏” (၁ကော ၁၅း၃)။
ဤအရာသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ အရေးကြီးသောပထမအချက် ဖြစ်ပါသည်။
“သဂြိုလ်ပြီးမှ ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း” (၁ကော ၁၅း၄)။
ဤအရာသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ အရေးကြီးသောဒုတိယအချက်ပင် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအရေးကြီးသော အချက်မပါဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောနေပါသည် ဟူ၍ ပြောနိုင်မည်နည်း? ယနေ့ခေတ်တွင် များသောအားဖြင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ ပထမအ ချက်နှင့်တတိယအချက်ကိုသာ အဓိကထားဟောတတ်ကြပါသည်! ထိုသို့ဟောခြင်းသည် ယနေ့ခေတ် တရားဟောဆရာတို့၏ အားနည်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ဗဟိုအချက်ကို ဟောကြားဖို့လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံပေးခြင်းကို ပေါ်လွင်အောင်၊ ပို၍ လေးစားဂုဏ် ပြုထိုက်သောခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောရာတွင် ပို၍တိကျဖို့လိုပါသည်။
လူအများအပြားစိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းသော တရားဟောချက်များ ယနေ့ခေတ်ရှားပါသလောက် မဟောကြတော့ပေ။ တကယ်အဟုတ်ပင်ဖြစ်ပြီဖြစ်သည်! ဘာကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရသနည်း?၊ အကြောင်း ရင်းမှာ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း နည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်များတို့ထံ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောရမည့်အစား၊ “အသင်းတော်၌ယုံကြည်သူများတို့ကို သာ ကျမ်းစာသင်ကြ၍ဖြစ်သည်”။ ထိုသို့ဖြင့်အသင်းတော်သည် မယုံကြည်သူအသင်းသားများနှင့်သာ ဖွဲ့စည်းကြသည်! ထိုသို့သော “အပေါ်ယံခရစ်ယာန်” တွေကို “ခရစ်ယာန်ကျင့်ဝတ်” ကို အထူးသင် ပေးကြပြီး အရေးကြီးသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို မဟောကြတော့ပေ! ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြု၍ တရားမဟောဘဲ မှန်ကန်သောဧဝံဂေလိ မဟုတ်နိုင်ပါ!
ဧဝံဂေလိသိရုံသိရှခြင်းဖြင့်၊ ခရစ်တောကို အသေအချင်သိခြင်းမဟုတ်နိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ၊ မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားဖြင့်သာ ခရစ်တော် နှင့်အကျွမ်းတဝင် သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုမိန့်တော် မူသည်ကား၊
“ထာ၀ရအသက်ဟူမူကား၊ မှန်သောဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသော ကိုယ်တော်ကို ၎င်း၊ စေလွတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို၎င်း၊ သိကျွမ်းခြင်းတည်း” (ယောဟန် ၁၇း၃)။
ဂျော့စ်ရိစ်ကာ ဘေရီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်၌ “သိခြင်း” သည် “အတွေ့အကြုံ အတွေ့ အထိ”ကို တွေ့ကြုံခံစားခြင်းဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ (Greek-English New Testament Lexicon). စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ မှန်ကန်သောသိခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်ကို သိကျွမ်းရ ပါမည်။ အသိအာရုံနှင့်သိရုံသက်သက်ဖြင့် သင်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ ကိုယ်တော်သဂြိုလ်ခြင်းကို အကျွမ်းဝင်သိရှိရပါမည်။ ထိုသို့ဖြင့်သာ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်ပါမည်။ ထိုသို့အားဖြင့် သင်သည် ထာ၀ရအသက်ကို ရရှိပါသည်။
ထိုသို့သော အတွေ့အကြုံသင်၌မရှိလျှင်၊ အကျွန်ုပ်သည် သင့်အဖို့ရင်လေးစရာဖြစ်စေမည် ဖြစ် သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားနှင့်ပုဂ္ဂိုလ် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ သင်သည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်လည်း သင်သည်ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် သင့်နှလုံးသားအစစ်မှန် မပြောင်းလဲ မချင်း၊ မှန်ကန်စွာယေရှုနှင့်မတွေ့ဘဲ မှန်ကန်သော ကယ်တင်ခြင်းလည်း မရရှိသေးခင်းထိ သင် စိတ်သည် ထွေပြားလျှက် ရှိနေလိမ့်မည်။
ခရစ်တော်ကို သိဖို့၊ သင်လက်ဝါးကားတိုင်ဆီသို့သွားရမည်။ သင့်အဖို့ကိုယ်စားအသေခံပေးသော ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မျော်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သချို Fင်းထဲသို့ သွားရောက်ဖို့လိုပါသည်။
“ထိုသခင်နှင့်အတူ သဂြို Fလ်ခြင်းကို ခံကြ၏” (ရောမ ၆း၄)။
ထိုသခင်နှင့်အတူ အသေခံခြင်းကား၊ “ငါတို့သည်လည်း အသစ်သောအသက်တာ၌ ကျင်လည်ကြ ရတည်း” (ရောမ ၆း၄)။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေကျမ်းပိုဒ်ကို အထူးသဖြင့်လေ့လာပြီး သခင့်အားသဂြိုလ်ခြင်း နှင့်သိကျွမ်းဖို့လိုပါသည်။
“ပြစ်မှားခြင်းကိုမပြု။ သူ၏နုတ်၌် မုသာမရှိသော်လည်း၊ လူဆိုးတို့နှင့်အတူ မြေမြှပ်ခြင်းငှါ စီရင်ကြ၏။ သို့ရာတွင် သေပြီးမှသူဌေး၌ ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၉)။
၁။ ပထမ၊ ကိုယ်တော်၏သဂြိုလ်ခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ ထင်ယောင်ထင်မှားမှု
“လူဆိုးတို့နှင့်အတူ မြေမြှပ်ခြင်းငှါ စီရင်ကြ၏။ သို့ရာတွင် သေပြီးမှသူဌေး၌ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၉)။
ခရစ်တော်ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ်တွင် “လူဆိုး”သည် ရာဇဝတ်သားကောင်တို့ကို ခေါ်ဆို ပါသည်။ “သူဌေး” တို့သည်ကား၊ ဂုဏ်အသရေရှိသောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ လူဆိုးတို့နှင့်အတူ တချိန်တည်းတွင် သူဌေးကို သဂြိုလ်ဖို့ကား၊ အဘယ်သို့သောအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်မည်နည်း? ၎င်းကျမ်းပိုဒ် သည် ရှေ့ဂျူးကျမ်းအနက်ပြန်ဆရာတို့အဖို့ အခက်တွေ့စေသော ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ထင်ယောင်ထင်မှားမှုတခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွေ့ကြုံရသော ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ထိုပဟေဋိကို ရှင်ယောဟန်ကျမ်းစာက ဖြေရှင်းကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ယေရှုအသေခံတောမူ သောအခါ လူဆိုးလက်ဝဲဘက်တစ်ယောက်၊ လက်ျာဘက်တစ်ယောက်ကြား၌ အသေခံခဲ့သည်။ ၎င်းတို့က ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုဒ်၌ ဖော်ပြသော “လူဆိုး” ဟူသော ကျမ်းစကားကို ဖော်ပြရည်ညွန်း ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် အသက်တော်ဦးစွာ ချုပ်ပြီး၊ ကျနန်လူဆိုးနှစ်ဦးမှာ၊ ဆက်လက်၍ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။
“ထိုနေ့သည် အဘိတ်နေ့ဖြစ်၍၊ နက်ဖန်နေ့လည်းကြီးမြတ်သောဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည်ကို ယုဒလူတို့သည် ထောက်၍အလောင်းတို့ကို ဥပုသ်နေ့၌ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ မရှိစေ ခြင်းငှါ ပိလတ်မင်းထံသို့ ဝင်ပြီးလျှင်၊ ခြေကိုချိုး၍ အလောင်းတို့ကို ယူသွားမည့်အ ကြောင်း ခွင့်တောင်းကြ၏” (ယောဟန် ၁၉း၃၁)။
ရောမစစ်သားတို့က ထိုလူဆိုးတို့၏ခြေကို ချိုးခဲ့ကြသည်။ အသက်ရှုရပ်ပြီး အလျှင်အမြန်သေဆုံးစေ ရန် ထိုသို့ပြုကြသည်။ သို့သော်ယေရှုထံသို့ရောက်သောအခါ၊ ခေါင်းငိုက်စိုက်လျှက် အသက်တော် ချုပ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအခါစစ်သားတို့က နဘေးတော်ကို လျှံချွန်ဖြင့် ထိုးဖောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ နံဘေးတော်fမှ သွေးနှင့်ရေသည် စီးဆင်းလေသည်။ အမှန်တကယ်အသက်တော် ချုပ်၍ နှလုံးရပ်တန့်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကားတိုင်ထက်မှ နန်းစံရာသို့ မျော်ကြည့်ရ
(၁၉၁၄-၁၉၉၃၊ အီရာ စတန် ဖီးလ်သီကုံးသော “ဆူးရစ်သရဖူ” )။
သို့သော် မျော်လင့်မထားသောအရာ ဖြစ်ပျက်လေ့ရှိ၏။ ချမ်းသာရူအးကယ်၀သော လူနှစ်ဦးလာရောက် ပြီး အလောင်းတော်ကို သဂြိုလ်ဖို့တောင်းဆိုလာသည်။ အရိမသဲမြို့သားသူဌေး ယောသပ်နှင့် ယေရှုထံည အချိန်၌ လာရောက်ခဲ့သော ဂျူးခေါင်းဆောင်နိကောဒင်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ (စီအက်ဖ် ယောဟန် ၃း၁-၂)။ ထိုသူတို့နှစ်ယောက်သည် လူရှေ့သူရှေ့ ထင်ပေါ်လျှက်မရှိသောယေရှု၏ တပည့် တော်နှစ်ဦးဖြစ်ကြသည်။ ပထမအကြိမ် လူရှေ့သူရှေ့ ထင်ရှားပြဖို့ ကြိုးစားပြီး ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြသော တပည့်နှစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာမက္ကီး ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ထိုသူနှစ်ဦးအား ဝေဖန်အပြစ်တင်ဖို့ မကြိုးစားကြပါနဲ့၊ သူတို့နှစ်ယောက်၌ လူသိရှင်ကြား မဖြစ်စေလိုသော နောက်ခံရှိနေ၍ဖြစ်သည်။ ထို့သော်၊ ထိုအချိန်တွင် ကိုယ်တော်၏ တပည့်တော် အရင်းတို့သည် နေရာအရပ်ရပ်သို့ ပြေးလွင့်ကုန်ကြပြီ၊ ထိုတပည့်တော်နှစ်ဦး သာလျှင်၊ ပေါ်လာပြီး အလောင်းကို သဂြိုလ်ကြသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983,Volume IV, p. 494).
အရိမသဲမြိုကသားယောသပ်နှင့် နိကောဒင်တို့သည် ယေရှု၏အလောင်းတော်ကို သယ်ဆောင်သွားခဲ့ ကြသည်။ ယောသပ်သည် သူဌေးဖြစ်သောကြောင့် မိမိ၏ဂူသချိုFင်းအသစ်၌ ယေရှုကို သဂြိုFလ်ခဲ့ပါ သည်။
“ကျောက်၌ထွင်းသော မိမိသချိုFင်းတွင်းသစ်ထဲမှာ ထားလေ၏၊ ကြီးစွာသော ကျောက်ကို လည်း တွင်း၀၌လှိမ့်ထားပြီးမှသွား၏” (မဿဲ ၂၇း၆၀)။
ခရစ်တော်၏ သဂြိုလ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ထင်မှားမှုတခုကို သေချာစွာရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူဆိုးနှစ်ကြားတွင် ကားတိုင်၌အတူ အသေခံခဲ့သည်မှာ မှန်သည်။ သို့သော် “သူဌေး၏ ဂူသချိုFင်း” အသစ်ထဲမှ သဂြိုလ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၉)။ ယေရှုသည် လူဆိုးနှင့်အတူ သေခြင်းခံရသော်လည်း ဂုဏ်အသရေရှိလူချမ်းသာ သချိုFင်း၌ သဂြိုလ်ခြင်းခံရသည်။ ဤကား ကျွန်ုပ် တို့၏သခင်သည် အဆုံးတိုင်နှိမ့်ချခြင်းကို ပြသတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ အလောင်းတော်ကိုကား ဆိုး သွမ်းသောလူတို့နှင့်အတူ သဂြိုလ်ခြင်း၊ ပုပ်စပ်သောသူတို့နှင့်ရောနှောခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ဂုဏ်အသရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်၏သချိုFင်း၊ ဂုဏ်ပြုခြင်း ချီးမြောက်ခြင်းဖြင့် နားခိုစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤထင်ရောင်ထင်မှားတခု သည် ဂျူးကျမ်းတတ်တို့အား ပဟေဋိဆန် ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ ကျမ်းပိုဒ်တော်၌ဖော်ပြထားသည်မှာ၊
“လူဆိုးတို့နှင့်အတူ မြေမြှပ်ခြင်းငှါ စီရင်ကြ၏။ သို့ရာတွင် သေပြီးမှသူဌေး၌ ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၉)။
ခရစ်တော်၏လူဆိုးနှင့်အတူ အသေခံခြင်း၊ သူဌေး၏သချိုFင်းတော်၌ သဂြိုလ်ခြင်းနှင့် စပ်လျှန်း၍ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာရှိသေး၏။ ကျွန်ုပ်ပြောကြားသကဲ့သို့ ဂျူးလူတို့က လူဆိုးဟု ဆိုရာတွင်၊ ရာဇဝတ်သားနှင့်ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်သော သူတို့ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ သူဌေးဟု ဆိုရာတွင် ဂုဏ်အသရေရှိလူသားကို ဆိုပါသည်။ ယေရှုက လူဆိုးနှင့်သူဌေးတို့ကြား၌ သေခြင်း၊ သဂြိုလ်ခြင်း ခံရခြင်းသည် ရှေ့ဂျူးလူတို့ မခွဲခြားတတ်သော လူဆိုးနှင့်သူဌေးကို ခွဲခြားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုလူတို့သည် နှစ်ဖွဲ့ဟူ၍ မသတ်မှတ်သင့်၊ အားလုံးတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
နေ့လည်း ထိုရှင်းလင်းချက်မှန်ကန်ပါသည်။ “လူဆိုး” ဟုခေါ်ဆိုသောသူတို့လည်း ဂုဏ်အ သရေရှသော သူဌေးတို့ကဲ့သို့ အပြစ်သားချင်းအတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဤဒေသနာတော်ကို ပြင်ဖို့ထိုင်နေစဉ်တွင် အဝေးကဖုန်းဆက်လာသည်။ ကွန်ဆာဗေးတစ် သာသနာအတွက် အလှူလှူ ဒါန်းရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းဆက်သူက ယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သန္ဓေသားဖက်ချခြင်း၊ ဣသရေလလူတို့ကို ကူညီဖို့ပျက်ကွက်ခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း စသောမည်သည့်အကြောင်းအရာက ပို၍အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုသနည်းဟု မေးပါသည်။ ဒါတွေက အရေးမကြီးပါဘူးဟူ၍ ကျွန်တော်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ပို၍အရေးကြီးပြီးလုပ်ဆောင်ရမည်မှာ၊ ယနေ့သင်းအုပ်ဆရာတို့ သည် မိမိတို့အသင်တော်၌ ရောက်ရှိလာကြသော အသက်တာအသစ်၌ မပြောင်းလဲသူတို့အား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဝေငှဖို့ရန် ပို၍အရေးကြီးသည်ဟု ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည် မှာ အဘယ်နည်း? သန္ဓေသားဖျက်ချခြင်း၊ ဣသရေလတို့အား ကူညီဖို့ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် လိင်တူ ဆက်ဆံခြင်းက အဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူး၊ ဖျားနာရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ရောဂါလက္ခဏာမျှသာ ဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာအရ ကုသ၍လုံးလုံး လျှားလျှားပျောက်ကင်း နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ရောဂါသည် အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်က လေဘရယ်လ် နှင့် ကွန်ဗေးတစ်၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ရီပက်ပလီကန်၊ “သူဌေး”နှင့် “လူဆိုး” တို့အားလုံးကို ဖျက်ဆီးနေသည်။
အပြစ်သည် နှလုံးသားထဲသန္ဓေတည်နေပါသည်။ လူသားတို့၏ နှလုံးသားသည်အမှားနှင့်ပြည့် နေသည်၊ ထို့ကြောင့် စိတ်နှလုံးအတိုင်း ပြုမူကြရပါသည်။ အပြစ်က အတွင်းနှလုံးသားကို ထိန်း ချုပ်ပါသည်။ သင့်အပြစ်နှလုံးက မှားယွင်းသောအရာကို စဉ်းစားတွေးခေါ်စေသည်။ သင့်အပြစ်နှလုံး သားက ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်စေသည်။ အပြစ်၌သာ နစ်မွန်းစေသည်။ အပြစ်က သင့်အတွင်း နှလုံးသားကို လမ်းညွန်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ကို ပြင်းစွာဆန့်ကျင်သောကြောင့် သင့်နှလုံးသားကြေကွဲjYပီး၊ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ မလွယ်ကူပါ။ သင်သည်လည်း ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ “ငါသည် ငြိုငြင်သောသူ ဖြစ်ပါသည်တကား။ ဤအသေကောင်မှငါ့ကို အဘယ်သူကယ်လွတ်မည်နည်း? (ရောမ ၇း၂၄)။ ဟူ၍ ခံစားဖို့လိုပါသည်။ ထိုသို့ခံစားမှသာလျှင် ယေရှုဘုရား “လူဆိုး”နှင့် “သူဌေး”တို့နှင့် ရောနှာ၍ သေခြင်းအကြောင်းကို နားလည်လာမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် အတိတ်ကာလ၌ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါ စေ။ ခရစ်တော်အသေခံခြင်း သဂြိုလ်ခြင်းဖြင့် သင့်အားအပြစ်မှ လွတ်မြောက်စေနိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဂေ.ဝီလ်ဘာချတ်မန်း ဓမ္မသီချင်းသီကုံးသော “သဂြိုလ်ခြင်းဖြင့် ငါ့အပြစ်ဖယ်ရှားပေးခဲ့” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကဲ့သို့ ဖြစ်လာမည်။ ("One Day" by Dr. J. Wilbur Chapman, 1859-1918). ခရစ်တော်သင်၏အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်နိုင်ပါသည်! ကောက်ကျင် စဉ်းလဲတတ်သော သင့်နှလုံးသားကို ခရစ်တော်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်!
၂။ ဒုတိယ၊ ထင်ယောင်ထင်မှားမှုကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်၏လူဆိုးတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်း၊ သူဌေး၏သချိုင်းတွင်း၌ ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း နှင့်ပါတ်သတ်၍ ဤဒုတိယအချက်က ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက်၊ “ပြစ်မှားခြင်းကိုမပြု” (ဟေရှာယ ၅၃း၉) ဟူသော ကျမ်းစကားမှစ၍ ဖတ်ကြပါစို့။
“ပြစ်မှားခြင်းကိုမပြု။ သူ၏နုတ်၌ မုသာမရှိသော်လည်း၊ လူဆိုးတို့နှင့်အတူ မြေမြှပ်ခြင်းငှါ စီရင်ကြ၏။ သို့ရာတွင် သေပြီးမှသူဌေး၌ ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၉)။
ဤကျမ်းပိုဒ်က ယေရှုခရစ်တော် ဂုဏ်အသေရေရှိစွာဖြင့် သေခြင်းကို ရှင်းပြပေးသည်။ “ပြစ်မှားခြင်းကို မပြု “ ဟူသောကျမ်းစကားသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မနစ်နာစေဟု ဆိုလိုပြီး ၎င်းကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် ဂုဏ်အသေရေရှိစွာ သေခြင်းကိုပြသသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူခိုး၊ လူသတ် သမားတို့ကဲ့သို့ ရာဇာဝတ်မှုကို မကျူးလွန်ဟုဆိုလိုသည်။ ရောမစစ်သားတို့၏ ပြောင်လှောင်ခြင်းကို သည်းခံခြင်း၊ တုန့်ပြန်မှုမပြုဘဲ ဂုဏ်အသရေရှိစွာဖြင့် အသေခံခဲ့သည်။ “သူ၏နုတ်၌ မုသာမရှိ” ယေရှုသည် ဘယ်တော့မှ မှားယွင်းခြင်းကို မသွန်သင်ခဲ့ပါ။ နှိပ်စက်ခြင်းခံရသည့်တိုင် ယေရှုသည် လူတို့အား လိမ်လည်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ခပ်သီသီနှင့်နေခဲ့သည်။ မှန်သောဘုရးအား ကိုးကွယ်ခြင်းမှ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား နောက်မလှည့်စေခဲ့ပါ။ မောရှေ၏ ပညတ်တော်အတိုင်း၊ အဆုံးတိုင် သည်းခံလိုက်လျှောက်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဘာသာရေးသမားတို့၏ ရန်သူမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်မည်သောအပြစ်ကို မကျူးလွန်ခဲ့ပါ။ တမန်တော်ရှင်ပေတရုက ခရစ်တော်နှင့် ပါတ်သတ်၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ထိုသခင်သည် ဒုစရိုက်ကိုမပြု။ နုတ်တော်၌လည်း မုသာကို ရှာမတွေ့” (၁ပေ ၂း၂၂)။
ဒေါက်တာယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ (ယေရှုခရစ်)သည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အသေခံ ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဂုဏ်အသရေရှိသေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ရာဇဝတ်သားကောင်ကဲ့သို့ အပြစ်ရှိသူမဟုတ်သောကြောင့် အရှက်သိက္ခာမဲ့သေခြင်းမဟုတ်၊ သူဌေး၏ဂူသချိုFင်း၌ ဂုဏ်အသရေ ရှိစွာဖြင့် သဂြိုလ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့်၊ ဂုဏ်အသရေရှိရှိ သေဆုံးသွားခဲ့သော ဝီစတန်ချက်ဟီးလ်ကို အမှတ်ရစေခဲ့ သည်။ သူ၏အလောင်းကို သုဓမ္မဇရပ်နား သင်းချိုင်း၌ မြေမြှပ်သဂြိုလ်ခြင်းခံခဲ့ရသော ဖခင်၏ဘေး တွင် ဂုဏ်အသရေရှိရှိဖြင့် သဂြိုလ်ခံသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်ကြသော ရန်သူများ၏အလယ်၌ သဂြိုလ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် သူ၏အလောင်းကို တဒန်းတနား အစီစဉ်ဖြင့် ဝက်မင်တန်၌ မြေမြှပ်သဂြိုလ်ခဲ့သည်။ သစ္စာကတိပျက်သော ဟစ်တလောနှင့် သူ့နောက် လိုက်နာဇီ၊ လူသတ်သမားတို့နီးနားသဂြိုလ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ချက်ဟီးလ်သည် ခရစ်ယာန်ယုံ ကြည်သူတော့ မဟုတ်ခဲ့၊ လေးစားထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ထာ၀ရအသက်ရှင်၍ကြီးမားသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် “ယေရှုခရစ်တော်” ဖြစ်သည် (၁တိ ၂း၅)။ ကြီးမား၍မြင့်မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်ကို ဖြေ လွတ်ဖို့ရာ အဖခမည်းတော်၏ ရှေ့တော်မှောက်၌ မိမိဆန္ဒအတိုင်း အသက်တော်ကို စွန့်သူဖြစ်သည်။ အသေမခံခင်တွင်၊ ယေရှုခရစ်မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ၊
“ကိုယ်အဆွေတို့အဖို့အလိုငှါ၊ ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ခြင်း မေတ္တာတော်သာ၍မြတ်သော မေတ္တာသည် အဘယ်သူ၌မျှမရှိ” (ယောဟန် ၁၅း၁၃)။
ခရစ်တော်ဟု ခေါ်သောယေရှုအား သင်သည် မည်ကဲ့သို့ တုန့်ပြန်မည်နည်း? စီ.အက်စ် လူးဝစ် သီကုံးသကဲ့သို့ တုန့်ပြန်မှုနှစ်ခုမှာ “မာန်နတ်ကဲ့သို့ တံတွေးaထွေးပြီး သူ့ကိုအသေသတ်မည်လား၊ သို့မဟုတ် ခြေတော်ရင်း၌ ဦးချ၍ ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံမလား”။ ဘယ်အရာကို သင်သည်ဆောင်မည်နည်း? တတိယအနေဖြင့် ရွှေးချယ်ရမည်မှာ သူ့ကို ငြင်းပယ်ပြီး၊ ယေရှုခံရသော နာကျင်ခြင်းလည်း အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်စေမည်သာဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအား သိက္ခါမဲ့စွာပြောဆိုဆက်ဆံကြသည်ကိုတော့ ကျွန်ုပ်အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်။ ထိုသို့ပြုမူသောသူမဖြစ် ဖို့ သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေပါသည်။ တီ.အက်စ် အိလီဝိစ်က ထိုသို့သော သူတို့ကို “ပေါပျက်သောလူ”ဟု ခေါ်သည်၊ မိမိတို့လိုအင်ဆန္ဒကိုသာ ဦးစားပေးသူတို့ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ငရဲမီးအိုင်ထဲဝေဒနာကို အထူးခံစားနေမည့်သူ မဖြစ်ဖို့သင့်အဖို့ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။
(၁၈၇၄-၁၉၅၈၊ ဂျေနီ၊ အီး၊ ဟက်ဆီသီကုံးသော “ကာရာနီသို့ ပို့ဆောင်ကျူး”)။
ထာ၀ရသေခြင်းမှ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူဖြစ်ဖို့၊ ကယ်တင်ရှင်ယေရှုအား ယုံကြည်ကိုးစားသောသူဖြစ်ဖို့၊ သင့်အဖို့ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။
အတူတကွ မတ်တပ်ရပ်ကြစို့။ ယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး၊ သင့်အသက်တာထာ၀ရရှင်သန်ဖို့ ဆွေးနွေးလိုသောသူအပေါင်းတို့ ဓမ္မဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ ရူအးကလာ ခဲ့ကြပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခန်းထဲသို့သွားရောက် ဓမ္မ ဆွေးနွေးလိုသောသူများအဖို့ မစ္စတာ လီက ကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပေးပါ။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဂရိတ်တန် အလ်.ချန်မှ ဟေရှာယ ၅၃း၁-၉ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၉၁၄-၁၉၉၃ခုနှစ်
ဧရာ.အက်ဖ် စတန်ဖီလ် သီကုံးသော “ဆူးရစ်သရဖူကျူး” နှင့် ၁၈၇၄-၁၉၅၈ ခုနှစ် ဂျန်နီ
အီး .ဟူစီ သီကုံးသော “ကာရနီကုံးပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ပါ”)ကို သီဆိုပေးပါသည်။
THE PARADOX OF OF CHRIST'S BURIAL
“ပြစ်မှားခြင်းကို မပြု။ သူ၏နုတ်၌ မုသာစကားမရှိသော်လည်း၊ လူဆိုးအတူမြေမြှပ်ခြင်းငှါ၊ စီရင်ကြ၏။ သို့ရာတွင်သေပြီးမှ သူဌေး၌ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၉)။
(၁ကော ၁၅း၃-၄)၊ (ယောဟန် ၁၇း၃)၊ (ရောမ ၆း၄)။
၁။ ပထမ၊ ကိုယ်တော်၏သဂြိုလ်ခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ ထင်ယောင်ထင်မှားမှု (ရှင်မဿဲ ၂၇း၆၀)၊ (ရောမ ၇း၂၄).
(၁တိ ၂း၅)၊ (ယေဟန် ၁၅း၁၃).